Home Wararka Jubbaland oo Garoonka Kismaayo ka soo celisay Taliye Bogmadow
Jubbaland oo Garoonka Kismaayo ka soo celisay Taliye Bogmadow
Madaxweyne ku xigeenka Koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo maanta shir jaraa’id ku qabtay garoonka magaalada Kismaayo ayaa sheegay in garoonka ay ka celiyeen wafti uu hoggaaminayo taliye cusub oo loo soo magacaabay ciidamada xerada 43-aad ee federaalka ee qaabilsan gobolada Jubbooyinka, wuxuuna sheegay in aanan lagala tashanin soo magacaabista.
Previous articleWasiir Cabdixakim: Hoowsha Hajka waxaa hortaagan qaar ka mida Golaha Wasiiraada! Maxuu ula jeedaa?
Next articleShirka Brussels oo go’aanadii ka soo bixi doono la baafiyay! Maxaa loo aadayaa?
Maamulka Puntaland Oo Tiro Dad Ah Usoo Qabqabtay Dad Oroma Ah...